3050-4000mAh Warshad, Alaab-qeybiyeyaal - Shiinaha Soosaarayaasha 3050-4000mAh
Awood sare 3.7V 4000mAh 606090 batari li-po ah oo dib loogu shubi karo Afhayeenka Bluetooth, Alaabta, Bangiga Power
Dib loo cusbooneysiin karo baytariga PLM-606090 3.7V 4000mAh batteriga wuxuu isticmaalayaa sheyga ugu fiican oo leh awooda ugu sareysa ee ay suurtagal tahay macaamiisha caadiga ah. Amarada OEM / ODM waa la soo dhaweynayaa codsiyo kala duwan, ganacsigeenu wuxuu daboolayaa inta badan Yurub, Aasiya iyo suuqa Ameerika. Waxaan rajeyneynaa inaan noqono saaxiibkaaga muddada dheer Shiinaha.
Batroolka Li-po batteriga K86 3400mAh 3.7V baytariga taleefanka ee loogu talagalay af-hayeenka Bluetooth, Alaabada Ciyaaraha, Robotka Elektarooniga ah, Taleefoonka Gacanta, POS, Express Smart Mini Printer
Dib loo cusbooneysiin karo baytariga PLM-K86 3.7V 3400mAh batteriga wuxuu isticmaalayaa sheyga ugu fiican ee leh awooda sare ee suurta gal ah macaamiisha caadiga ah. Amarada OEM / ODM waa la soo dhaweynayaa codsiyo kala duwan, ganacsigeenu wuxuu daboolayaa inta badan Yurub, Aasiya iyo suuqa Ameerika. Waxaan rajeyneynaa inaan noqono saaxiibkaaga muddada dheer Shiinaha.
Batroolka Li-po 36-DC3800MA 3800mAh 4.2V Qolka baytariga ee loogu talagalay af-hayeenka Bluetooth, Qalabka Ciyaaraha, Robotka Elektarooniga ah, POS
Bateriga dib loo soo celin karo ee loo yaqaan 'PLM-36-DC3800MA 4.2V 3800mAh' ayaa isticmaalaya waxyaabaha ugu fiican ee leh awood sare oo macquul ah macaamiisha caadiga ah. Amarada OEM / ODM waa la soo dhaweynayaa codsiyo kala duwan, ganacsigeenu wuxuu daboolayaa inta badan Yurub, Aasiya iyo suuqa Ameerika. Waxaan rajeyneynaa inaan noqono saaxiibkaaga muddada dheer Shiinaha.
Baytariga Li-poor 964674 3.7V 4000mAh Battery Cell for Bluetooth Afhayeenka, Toy, Bangiga Awoodda
Bateriga dib-u-buuxin kara ee PLM-964674 3.7V 4000mAh ayaa isticmaalaya waxyaabaha ugu fiican ee leh awoodda ugu sarreysa ee suurtagalka ah macaamiisha caadiga ah. Amarada OEM / ODM waa la soo dhaweynayaa codsiyo kala duwan, ganacsigeenu wuxuu daboolayaa inta badan Yurub, Aasiya iyo suuqa Ameerika. Waxaan rajeyneynaa inaan noqono saaxiibkaaga muddada dheer Shiinaha.
Laba Way Radio M2 3.8V 4000mAh Polymer Lithium Batari Xirmay batari Lacageed oo loogu talagalay Micro Talk Radio, Mashiin Qarax Qarxin
Dib loo cusbooneysiin karo baytariga PLM-M2 3.8V 4000mAh batteriga wuxuu isticmaalayaa sheyga ugu fiican oo leh awooda ugu sarreysa ee suurta galka macaamiisha caadiga ah. Amarada OEM / ODM waa la soo dhaweynayaa codsiyo kala duwan, ganacsigeenu wuxuu daboolayaa inta badan Yurub, Aasiya iyo suuqa Ameerika. Waxaan rajeyneynaa inaan noqono saaxiibkaaga muddada dheer Shiinaha.
Faahfaahinta alaabta: Codsiga: Alaabta, Qalabka Guriga, Macaamiisha Macaamiisha Magac Brand: Shahaadada PLM: MSDS Lambarka Moodalka: PLM- 805080 Meesha Asalka: Guangdong, Shiinaha Miisaanka: 45g / PC Nooca Batariga: Bateriga polymer-ka Dib-u-buuxin kara: 7.4V Awood: 4000mAh Batariga Cabirkiisa: 8.0mm * 50mm * 80mm Dammaanad: 12 Bilood Isticmaalka: Bluetooth ku hadla, alaabta caruurtu ku ciyaarto, alaabada elektarooniga ah, bangiga awooda nolosha Wareeg: 1000Times heerka Dheeca: 4.0A Xidhmada: Xidhmada Sanduuqa Shakhsiyeed Badbaadinta Badan ple 1.Dual MOS octagonal p .. .
Sharaxaada Alaabta: Codsiga: Alaabta Ciyaarta, Qalabka Guryaha, Macaamiisha Elektarooniga Magaca Nooca: Shahaadada PLM: Nambar Model MSDS: PLM- 102662 Goobta asalka ah: Guangdong, culeyska Shiinaha: 75g / PC nooca Battery: Nooca bateriga ee dib loo cusbooneysiin karo Voltage: 3.7V Awoodda: 3200mAh Cabbirka batteriga: 10mm * 26mm * 62mm Caddaynta: 12 Bilood Adeegsiga: Hadalka Bluetooth, qalabka caruurtu ku ciyaarto, POS, nolosha Wareeg: 1000Times Xaraashka: 3.2A Xidhmada: Xidhmada Khadka Shaashada ee Shaqsiyaadka Badan Protection 1.Dual MOS octagonal guddiga 2.Sho. ..